Taageereyaasha Barca: Garamada Real Madrid Waa Kuwii Haweenka
HomeWararka MaantaTaageereyaasha Barca: Garamada Real Madrid Waa Kuwii Haweenka
Kooxda ku guulaysatay Champions League sannadkan ayaa Isniintii soo bandhigtay garamada cusub ee ay xili-ciyaareedka 2014-2015 ku ciyaari doonto, laakiin waxa ka gadooday oo weji gabax ku qaabilay taageereyaasha xagjirka ah ee kooxda ay cadaawadda fogaatay ka dhaxayso ee Barcelona.
Garamo midabkoodu yahay casaan khafiif ah (Pink), ayay Real Madrid shaacisay in ay noqon doonaan kuwa ay ku ciyaari doonaan kulamada ay martida yihiin, halka kuwa ay garoonkooda joogaanna ay xidhan doonaan Caddaan.
Sannadihii u dambeeyey waxay Real Madrid xidhan jirtay kulamada ay martida tahay midabbo badan, sida Akhtar, Casaan, Buluug iyo Liimi, laakiin midabka isku milanka ah ee u dhow casaanka khafiifka ah (Pink) ayaa ay sannadkan soo kordhisay, kaas oo noqon doona markii ugu horreysay taariikhda ee ay midabkaas ku ciyaarto.
“Garamada labaad (kuwa ay xidhan doonaan kulamada ay martida tahay kooxdu) waa kuwo taariikhi ah. Midabka ugu weyni waa sac-faraan, laguma arag kooxda waligeed 112 sannadood oo ay jirtay. Raqabadda waxa loo samaynayaa si gaar ah oo soo jiidasho saamayn leh ah maadaama laga samaynayo Pink iyo Buluug” sidaa waxa lagu yidhi warbixin ay kooxdu daabacday.
Jawaabta taageereyaasha Barca
Jawaabo kala duwan ayaa laga bixiyey midabkaas ay Real Madrid soo bandhigtay, kuwaas qabsaday baraha bulshadu isticmaasho, waxase dhalleecayntii ugu degdegga badnayd ku qaabilay taageereyaasha Barca.
Qasnajiga taageereyaasha khaaska ah ee Barca ee loo yaqaanno Penya Joan Gamper, Josep Maria Vazquez ayaa sidan ku sifeeyey “Waxa kaliya oo looga dan leeyahay inay lacag sameeyaan. Way fool xun yihiin, midabkana way sii fogeeyeen” ayuu yidhi.
Sergi Soler oo isaguna ka mid ah taageereyaasha Barca ayaa sidan yidhi “Ma aha midabkii ragga. Waxa ay ku habboon yihiin in uu xidho Ronaldo”.
Sidaas oo ay tahay, ayaa waxa difaacidda midabkaas u istaagay gool-hayihii hore ee Real Madrid, Paco Buyo, waxaanu sheegay in midabkaasi heersare yahay.
“waxay ila tahay waa heersare. Si weyn ayaa loo iibsanayaa. Garamada Casaanka ahi aad ayay caan u noqdeen, kuwanna sidaas oo kale inay noqdaan ayaan rajaynayaa. Anigu waligay maan xidhan midabka Pink, waxna kama qabo, ciyaartooyaduna sidaas oo kale ayaanay waxba uga qabin in ay xidhaan, waxaanan hubaa in si weyn ay u iibsami doonaan.” ayuu yidhi.
Thierry Henry Oo Garan Waayey wax Uu Ku Amaano Messi
07/05/2015 Abdiwahab Ahmed
Atletico Madrid Oo La Qabtay Iyo Hirdankii Kaalinta Koowaad Oo Dib u Curtay
Zenit St. 2-2 Sevilla